Bluetooth headset haina chete inoshandira kudzikisa ruzha, asi zvakare ine inotonhora yekudzikisa ruzha ruzivo, iyo vanofarira vanofanira kudzidza pakutanga!
Basa rekudzikisa ruzha rakakosha zvakanyanya kune mahedhifoni.Imwe ndeyokuderedza ruzha uye kudzivisa kuwedzera kukwirisa inzwi, kuitira kuderedza kukuvara kwenzeve.Chechipiri, sefa ruzha kuti uvandudze mhando yenzwi uye kufona mhando.Kuderedza ruzha kwakakamurwa kuita inoshingaira kuderedza ruzha uye passive ruzha kuderedza.
Kuderedzwa kweruzha kunoenderana nemisimboti yemuviri: mahedhifoni anoshandiswa kuwedzera uye kuputira nzeve yese yekudzikisa ruzha.Vane zvinodiwa zvakanyanya zvezvinhu, kutadza kwemhepo uye hazvisi nyore kuoma mushure mekudikitira.Iyo iri munzeve yerudzi "inoiswa" mugero renzeve kuvhara nzeve yekuderedza ruzha.Hazvina kugadzikana kupfeka kwenguva yakareba, kudzvinyirira mukati uye kunze kwenzeve yenzeve hakuna kuenzana, uye nguva yekupfeka haifaniri kunge yakareba, iyo inokanganisa kunzwa.
Active ruzha kuderedza kunowanikwa nekuongorora chip mumusoro.Kutevedzana kwekudzikisa ruzha ndiko:
1. Kutanga, maikorofoni yechiratidzo yakaiswa munzeve inoona ruzha rwepasi-frequency (100 ~ 1000Hz) munharaunda inogona kunzwika nenzeve (kusvika ku3000hz ikozvino).
2. Ipapo chiratidzo chemheremhere chinoparidzirwa kudunhu rekutonga, iro rinoita nguva chaiyo yekushanda.
3. Iyo hi fi horn inoburitsa masaisai eruzha ane chinhanho chakapesana neamplitude yakafanana neruzha rwekudzikamisa ruzha.
4. Saka ruzha runopera uye harunzwiki.
Active noise reduction yakakamurwa kuita ANC, ENC, CVC neDSP, saka ngationgororei kuti Chirungu ichi chinorevei.
Nheyo yekushanda yeANC: (inoshanda ruzha kutonga) ndeyekuti maikorofoni inounganidza kunze ruzha rwekunze, uyezve sisitimu inoishandura kuita inverted ruzha wave uye inoiwedzera kumagumo enyanga.Pakupedzisira, ruzha rwunonzwikwa nenzeve dzevanhu nderinoti: ambient noise + inverted ambient ruzha.Iwo marudzi maviri eruzha akaiswa pamusoro kuti aderedze ruzha rwekunzwa, uye anobatsirwa ndiye pachake.Active kudzikisa ruzha inogona kukamurwa kuita feedforward inoshanda kudzikisa ruzha uye mhinduro inoshanda inoderedza ruzha zvinoenderana nechinzvimbo chepikicha maikorofoni.
Enc: (kudzima ruzha rwezvakatipoteredza) kunogona kudzvanya zvine mutsindo 90% yeruzha rwezvakatipoteredza, kuitira kuderedza ruzha rwezvakatipoteredza kusvika kupfuura 35dB, kuitira kuti vatambi vemitambo vataure vakasununguka.Kuburikidza neaviri maikorofoni array, nyatso verenga matauriro emutauri, uye bvisa marudzi ese eruzha rwekukanganisa munharaunda uchichengetedza izwi rinonangwa munzira huru.
CVC: (yakajeka kubatwa kwezwi) ndiyo tekinoroji yekudzikisa ruzha yekufona software.Kunyanya kune echo inogadzirwa panguva yekufona.Kuburikidza neyakazara duplex maikorofoni denoising software, inopa echo uye ambient ruzha rwekubvisa basa rekufona.Ndiyo yakanyanya kusimukira yekudzikisa ruzha tekinoroji muBluetooth kufona headset parizvino.
DSP: (digital sign processing) inonyanya kunangwa nepamusoro uye yakaderera frequency ruzha.Nheyo yekushanda ndeyekuti maikorofoni inounganidza yekunze ruzha ruzha, uyezve sisitimu inokopa reverse sound wave yakaenzana neyekunze nharaunda ruzha kudzikamisa ruzha, kuitira kuti uwane zvirinani kuderedza ruzha.Nheyo yeDSP yekudzikisa ruzha yakafanana neANC kudzikisa ruzha.Nekudaro, iyo yekumberi uye yekumashure ruzha rweDSP kuderedzwa kweruzha inonatsirwa uye inogadzirisana mukati meiyo system.
Chiziviso cheCopyright: Ichi chinyorwa ndicho chinyorwa chekutanga che CSDN blogger "momo1996_233", iyo inotevera chibvumirano chekodzero yeCC 4.0 by-sa.Kuti udhindwezve, ndapota batanidza iyo yekutanga source link uye ichi chiziviso.
Yekutanga link: https://blog.csdn.net/momo1996_233/article/details/108659040
Nguva yekutumira: Mar-19-2022
Inobata Bluetooth 5.0 Earbuds, Wireless Bluetooth Earphone, Noise Kanzura Earbuds, Bluetooth Headset Ine Mic, Munzeve Earphone, Bluetooth Mono Headset,